स्वस्थ रहन चाहनुहुन्छ ? फलो गर्नुहोस् यी ९ उपाय - Dainik Online Dainik Online
स्वस्थ रहन चाहनुहुन्छ ? फलो गर्नुहोस् यी ९ उपाय
प्रकाशित मिति : ३१ जेष्ठ २०७७, शनिबार ९ : ०५
आफूलाई स्वस्थ राख्नका लागि हामी धेरै काम गर्छौं । तर पनि कहिलेकाहीँ बिरामी हुन्छौँ । हामीले यदि साँच्चिकै आफूलाई स्वस्थ राख्ने हो भने केही त्यस्ता प्रण गर्न जरुरी छ, जसले निरोगी बन्न सकिन्छ । धेरैले नयाँ वर्षमा यस्ता खालका संकल्प गर्छन् । तर, शरीरलाई स्वस्थ राख्ने संकल्प गर्न नयाँ वर्ष कुर्नुपर्दैन, आजैदेखि सुरु गर्नुहोस् ।
नियमित दिनचर्याको ख्याल गर्नुहोस्
नियमित सन्तुलित भोजन
५ देखि ८ घन्टा निद्रा
नास्ता खाने बानीको विकास गर्नुस्
ध्यानले मस्तिष्कलाई तेजिलो बनाउने काम गर्छ । ध्यान एक साधारण तर शक्तिशाली प्रविधि हो, जसले तपाईंको मस्तिष्कलाई शान्त र स्थिर राख्न सक्छ । तपाईं आफ्नो आँखा बन्द गरेर बस्नुस् र गहिरो आराम गर्नुस् । सुरुमा यो असहज भए पनि दृढ इक्षाशक्तिले आफ्नो मनलाई नियन्त्रणमा लिएर भए पनि ध्यान दिने बानीको विकास गर्नुहोस् । ध्यानले एलर्जी र उत्तेजित हुनबाट जोगाउँछ भने थकान कम गराउँछ । मुटुसम्बन्धी बिमारी, हाई ब्लडप्रेसर, अनिद्रामा आराम मिल्छ । हामी मनोवैज्ञानिक रूपमा पनि बिरामी हुन सक्छौँ, यसबाट जोगिन पनि ध्यान गर्न जरुरी छ ।
नियमित रूपमा स्वास्थ्य चेकअप